Waxaa lagu daabacay Warbixin '' Marxaladihii Furitaanka ee Istanbul '| RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWarbixin la daabacay 'Marxaladihii Furitaanka ee Istanbul'
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Micnaheedu maahan in si caadi ah loogu noqdo.
Guddiga La-Talinta Sayniska ee IMM ayaa daabacay warbixin ku saabsan 'Marxaladaha Furitaanka ee Istanbul'. Warbixinta; Turkiga waa hoos u dhaca tirada dhimashada guud ahaan; hase yeeshee, waxaa la sheegay in aysan jirin xog caafimaad qabta oo la xiriirta Istanbul. Warbixinta ayaa soo jeedisay in go'aanka loo gudbo marxaladda xigta ee nidaamka caadiga ah kadib labo toddobaad oo dib loo eego.
Warbixinta Guddiga Sayniska ee Hm, aragtida soo socota ayaa lagu xusay iyaga oo sheegaya muhiimadda qaanuunka daahfurnaanta iyadoo loo wargaliyo bulshada si joogto ah.
KA QAADAN MACLUUMAAD LABA Toddobaad
“Marxalad gaar ah ayaa la gaarey oo ku faafaya COVID-19 masiibada. Geedi socodka ku soo laabashada nolosha caadiga ah waa in loo qorsheeyaa si tartiib tartiib ah, qaran ahaan iyo deegaan ahaanba, iyadoo la waafajinayo mabaadi'da sayniska caafimaadka bulshada oo waa inaan loo gudbin iyada oo aan la buuxin shuruudaha qaarkood iyadoo si taxaddar leh loo qiimeynayo tallaabo kasta oo loo qaado isku-xirnaanshaha cusub.
Dayac ka imaan kara dib-u-furista waxay wataan khatarta ah in dib loosoo kordhiyo kiisaska COVID-19. Sababtaas awgeed, tallaabo kasta oo la qaado waxay muhiimad weyn u leedahay si aysan u lumin waqti iyo dadaal, oo aysan dib ugu noqon.
Tirada kiisaska cusub ee la arkay inta uu furanyahay waa in si taxaddar leh loo raacaa, oo tillaabooyinka cusubna waa in lagu go'aamiyaa iyadoo la fiirsanayo saameynta furitaanka. Xaaladda guud, furitaannada, oo ah kuwo baaxad weyn leh, oo saameyn kara dadyowga waaweyn, waa in si tartiib tartiib ah loo fuliyaa, ka dib muddada labada toddobaad ee kormeerka ah, tallaabada xigta waa in loo gudbaa si si cad loogu arko waxqabadka tallaabo kasta. Intaas waxaa sii dheer, kala-guurka waa inuu ahaadaa mid laba-geesood ah oo haddii loo baahdana, si dhakhso leh looga baxo.
Dib-u-furista waa inay ku bilaabataa waxqabadka ugu hooseeya, gobollada tirada dadku ku yar yihiin iyo kooxaha da'da ugu halista badan. Sidaa darteed, marka ugu horeysa dadku waa inay bilaabaan isticmaalka goobaha dadweynaha iyagoo adeecda sharciga masaafada jireed (1 Mitre Rule), laakiin dhinaca kale, meelaha xiriirka sare leh sida baararka, makhaayadaha, iskuulada, meelaha iibka ah ee waxyaabaha aan muhiimka aheyn waa in looga tagaa taariikh dambe.
ISTANBUL WAA IN AY HADAAN BARNAAMIJ KU SAMEEYSA
Istanbul waa inay lahaato barnaamij dib u furid gaar ah, labadaba waa magaalo weyn oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan iyo gobolka ay sida aadka ah u fido cudurka. Warbixintan, oo qiimeynaysa hannaanka dib-u-furista gaar ahaan gobolka Istanbul, waxaa looga golleeyahay in lagu saadaaliyo heerarka heer gobol ee ku saleysan shuruudaha sayniska ee ay soo jeediyeen ururrada karti u leh iyo dunida sayniska. Tirada kiisaska Istanbul waa 1 boqolkiiba wadarta tirada kiisaska bishii hore (10 Abriil) ee dillaacay. muujiyey. Tirada kiisaska maanta la qaddariyo in ka badan 60 boqolkiiba.
URURKA CAAFIMAADKA DADWEYNAHA OO AY KU SAABSAN YAHAY
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu aqoonsaday lix shuruudood oo lagu bilaabayo ka qaadista xayiraadaha baaxada leh. Wadamadu waa inay buuxiyaan shuruudahan soo socda:
1. Caddeymo in marinka COVID-19 uu hoos imaanayo,
2. Awoodaha caafimaad ee bulshada iyo nidaamka caafimaad ee kufilan ee ogaanshaha, go'doominta, tijaabinta, dabagalka xiriirka iyo karantiil,
3. Yaraynta halista qaraxyada ka dhaca deegaannada leh dareen aad u sarreeya - guryaha dadka lagu xanaaneeyo, guryaha lagu xannaaneeyo dadka naafada ah, iwm.
4. Tallaabooyin ilaalin ah, oo ay ku jiraan masaafada jir ahaaneed, gacmo dhaqashada, nadaafadda neefsashada iyo kormeerka heerkulka jirka, ayaa laga fulinayaa goobaha shaqada,
5. Maareynta halista dhacdooyinka ka yimaada bulshooyinka leh halista sare ee faddaraynta,
6. Bulshada oo leh cod iyo iftiin xagga kala guurka ah, oo qayb ka ah geedi socodka iyo kaqeybgalka
GAADIIDKA iyo KA QAYBGALKA BULSHADA WAA MUHIIM.
Magaalada Istanbul, oo la sheegay inay ugu yaraan boqolkiiba 60 ka tahay kiisaska saxda ah, waxaa aad muhiim u ah in la ogeysiiyo dowladda hoose habka dib u furista iyo in la helo fikradahooda. Xog sax ah oo sax ah iyada oo la raacayo qeexitaanka kiisaska suurtagalka ah ee WHO waa in maalin walba loo siiyaa Istanbul, isla markaana xogtan waa in loo heli karaa magaalooyin kale.
Bulshadu sidoo kale waa qayb muhiim ka ah dib u furista marxaladaha waana in aan la iloobin in ay qaabayn doonto dabeecadda dadka bulshada dhexdeeda. Waa inay bulshada ogaataa in habka furitaanka uusan aheyn geedi socod wax walba oo kusoo noqnoqonaya cudurka ka hor cudurka faafa, waa tilaabooyinka la qaadayo inta lagu gudajiro marxaladaha, iyo in dayacnaanta ka imaaneysa inta lagu gudajiro furitaanka ay ka beddeli doonto marxaladaha.
Mar haddii heerarka la go'aamiyo, waa in lala wadaagaa bulshada isla markaana loo oggolaado ka qeybgalka bulshada. Sababaha / sababaha talaabooyinka la qaaday waa in loo sharxaa lana rajeeyaa inay u hoggaansamaan heerarka. Bixinta kaliya taariikhda saxda ah iyada oo aan sharraxin xiriirka sababaha sababa waxay sababeysaa in rajada dadku ku badato. Aad ayey muhiim u tahay in bulshada loo oggolaado inay qayb ka tahay hawsha oo laga qaybqaato hawsha, iyo in sifiican loo iftiimiyo marxaladda kala-guurka.
Wajiga caadiga ah, taageerada bulshada iyo u hogaansanaanta ganacsiyada shuruucdu aad ayey muhiim u yihiin. Iyadoo la tixgalinayo arrimaha tixgalinta la siinayo iyo qodobada dib loo furay, qodobadan waa in si cad loogula wadaagaa dadweynaha. Markuu xogtu hufan yahay; shakiga, walwal, dabeecadda halista, faafinta macluumaadka beenta ah, aaminaadda macluumaadka khaldan. Sidaa darteed, shuruudaha furitaanka iyo habraacyadu waa inay noqdaan kuwo daah furnaan leh.
Aad ayey muhiim u tahay in heerka masaafada jireed iyo tallaabooyinka nadaafadda ee goobaha shaqada dadweynaha ee furitaanka lagu qaado ay qabtaan saraakiisha booliiska, iyo in dacwadaha dambiyada ee shirkadaha aan fulin tallaabooyinka ay fuliyaan kormeerayaasha maxalliga ah. Hawshani waxay ku ficnaan kartaa oo keliya iskaashiga iyo wada shaqeynta mas'uuliyiinta dowladda hoose ee la leh maamulada maxalliga ah.
XUQUUQDA QOYSKA ISTANBUL
Turkiga guud ahaan waxaa loo doortay wixii ku saabsan Istanbul marka lagu daro inay si caadi ah u sharaxdo qaar ka mid ah macluumaadka ku dhowaad xog aan la heli karin.
Xogta xaddidan ee la heli karo ayaa baaray haddii shuruudahan la waafaqay qiimeyn laga sameeyay hoos u dhac tan iyo bartamihii bishii Abriil, tirada kiisaska cusub ee Turkiga bilowgii May, laakiin taasi waxay joojisay faafitaanka usbuuca 2aad ee koritaanka.
yareynta tirada dhimashada ee shuruuda kale, Turkiga ayaa ka walaacsan laakiin kama jiraan xogta guud ee ku saabsan Istanbul. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego qiimeynta laga sameeyay xogta Xog-hayaha Cisbitaalka IMM, tirada dhimashada ee Istanbul ayaa hoos u dhacday 14-kii maalmood ee la soo dhaafay. Inta jeer ee cudurka ee ku dhaca xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee lagu sheegay cabir kale sidoo kale lama yaqaan.
Maxay tahay sababta 2013 ay uga soo qayb gasho Fairtex 10 Fair!
Burulaş wuxuu soo saarey jadwalka garoonka diyaaradaha ee Bursa Yunuseli
Ururka Caafimaadka Adduunka
Wajiga Caadiga ah
Guud ahaan Turkey caadiga ah
Warbixin ku saabsan mashaariicda taraamulka İzmir
Jaamacadda Istanbul ayaa diyaarisay warbixin ku saabsan tuugada tuulada Janik